Isbarbardhiga mushaharka iyo shaqooyinka wadamada yurub | Dhaqaalaha
Ciidaha, saacadaha shaqada iyo mushaharka Yurub
Jose Manuel Vargas sawir-haye | | Shaqada
Dhawaan wargeyska Mareykanka The Wall Street Journal ayaa sameeyay warbixin uu ku muujinayo isbarbardhiga fasaxyada, saacadaha shaqada iyo mushaharka dalal kala duwan. Xaqiiqda ugu horreysa ee xiisaha leh ee aan ku fiirsanno waa in waddanka ugu xisbiyada badan sanadka oo dhan uu yahay Japan, oo wadar ahaan ah 16, oo ay ku xigto Koonfurta Kuuriya oo leh 15. Isbaanishka, ciidaha qaran, oo aan la tirin fasaxyada gobollada ama gobolka. deegaanka, waxaa jira 9.
Si kastaba ha noqotee, Japan waxay leedahay 16 fasax qaran, haa, laakiin celcelis ahaan 17 maalmood oo fasax ah sanadkiiba. Arrinta cajiibka ah ee kiiska ayaa ah in Jabaanku aysan ku raaxeysan maalmahan oo dhan, maadaama ay qaataan kaliya kalabar fasaxyada u dhigma, celcelis ahaan 8,6. Wax aan ka dhicin, dabcan, dalal kale. Ruushka waa dalka ugu fasaxa badan maalmaha, oo ay ku jiraan ciidaha, oo leh 40, waxaa ku xiga Sweden iyo Talyaaniga oo leh 36, Faransiiska, Norway iyo Brazil oo leh 35, iyo Denmark iyo Spain oo leh 34.
Mawduucan oo ah fasaxyada shaqada (maahan tirinta ciidaha) waxaa jira kala duwanaansho dalal kala duwan oo Yurub ah. Jarmalka waxay ku leeyihiin 29 maalmood, Austria, Finland, France, Greece, Norway iyo Sweden 25 maalmood, Belgium, Bulgaria, Lithuania, Hungary, United Kingdom iyo Switzerland 20 maalmood, Spain iyo Portugal 22 maalmood, iyo Holland iyo Ukraine 24 maalmood.
Sida for maalin shaqo Griiga waa wadanka yurub ugu saacadaha badan sanadkii, waa 2.032. Waxaa ku xiga Hungary oo leh 1.980 saacadood oo shaqo sanadkiiba, Spain oo leh 1.690, Denmark oo leh 1.522, Jarmalka oo leh 1.413 iyo Netherlands oo leh 1.379 saacadood. Sida uu qoray The Wall Street Journal, sababtu maaha inaad saacado badan ku qaadatid shaqada darteed waxaad u dhaafaysaa wax badan. Waxa ay tahay inaad xisaabta ku darsato ayaa ah wax soo saar, taas oo aan ku xidhnayn oo keliya saacadaha laakiin sidoo kale ku xidhan sida shaqada loo abaabulo, tikniyoolajiyadda iyo jadwalka iyo arrimo kale.
In Spain, gaar ahaan, ka wax soo saar saacadeed reer Isbaanishku waa 107 dhibcood (celceliska Midowga Yurub waa 100 dhibcood), oo aad uga fog 124,8 Jarmalka ama 132,5 Belgium.
Mawduuca ah Salariino Haa, waxaa jira wax badan oo muuqda oo u dhexeeya Spain iyo qaar ka mid ah dalalka Yurub. Mushaharka ugu yar dalkeenu waa 753 yuuro. Hoos waxaa ku yaal Greece oo leh 684 euro, Portugal oo leh 566, Turkiga oo leh 425, Croatia oo leh 405, Estonia oo leh 355, Hungary oo leh 344, Czech Republic oo leh 328, Latvia oo leh 320, Lithuania oo leh 290, Romania oo leh 191 ama Bulgaria oo leh 174.
Waxaa ka mid ah mushaharka ugu yar Kuwa ugu sareeya Yurub waa Luxembourg oo leh 1.921 euro, Belgium oo leh 1.502, Netherlands oo leh 1.486, Ireland oo leh 1.462, France oo leh 1.445 ama Boqortooyada Ingiriiska oo leh 1.217.
Waxaa ka mid ah celceliska mushaharka, Spain waxay leedahay 26.027 euro, oo aad uga fog 71.611 euro celcelis ahaan Switzerland, 67.144 Norway ama 53.061 Denmark. Kuwa ugu hooseeya Yurub waa celceliska mushaarka sanadlaha ee Bulgaria, oo leh 4.590 euro, waxaa ku xiga Romania oo leh 5.635 iyo Lithuania oo leh 7.269.
Wadada buuxda ee maqaalka: Dhaqaalaha Dhaqaalaha » Dhaqaalaha guud » Shaqada » Ciidaha, saacadaha shaqada iyo mushaharka Yurub
Xaaladda dhaqaale ee isku dhaca Israa’iil iyo Qaza